Madaxweyn Xasan Shiikh iyo Lafta gareen oo xariga ka jaray xarun lagu soo kordhiyay Madaxtooyada Koofur galbeed | dayniiile.com
Home WARKII Madaxweyn Xasan Shiikh iyo Lafta gareen oo xariga ka jaray xarun lagu...
Madaxweyn Xasan Shiikh iyo Lafta gareen oo xariga ka jaray xarun lagu soo kordhiyay Madaxtooyada Koofur galbeed
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koofur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen ayaa si wadajir ah xariga ugu jaray xarun cusub ee lagu soo kordhiyay Madaxtooyada.
Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maanta gaaray Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay waxaa ay shir laleeyihiin madaxda ugu sarreysa Koofur Galbeed oo uu ugu horreeyay Madaxweyne Cabdicasiis Lafta gareen.
Afhayeenka Madaxweynaha Soomaaliya Afhayeenkiisa Cabdikariim Cali Kaar oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in labada madaxweyne uusan jirin wax ay kaligood ka wada hadlayaan, ee si guud tashi loola samaynayo bulshada iyo maamulka Koonfur Galbeed, isaga oo yiri “Madaxweynaha ma tagayo dal kale, meesha uu u socdaayi waa dalka dhexdiisa”.
Sidoo kale, wuxuu tilmaamay in arrinka xirnaanshaha Sheekh Mukhtaar Abuu Mansuur Rooboow aysan ahayn moowduuc gaar ah oo ay labada madaxweyne ka wada hadlayaan.
Previous articleMadaxweynaha Xasan oo si weyn loogu soo dhoweeyey Baydhaba, shaaciyeyna qorshihiisa
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo xariga ka jaray dugsiga hoose dhexe ee agoonta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo uu balan qaaday
Maxay ka wada hadleen Ergeyga gaarka ah ee Abaaraha & Safiirka...